नेपालले एसियन भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्ने पक्का « Nepal Break
नेपालले एसियन भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्ने पक्का
काठमाडौं । नेपालको सिनियर राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले एसियन च्याम्पियनसिप खेल्ने पक्का भएको छ ।
एसियन भलिबल महासंघ (एभीसी)को बैठकले यस वर्ष चीनको गोन्जाओमा हुने एसियन च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल भलिबल संघले चीनमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपालबाट दाबी प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । चाईना भलिबल संघले आयोजना गर्ने एसियन च्याम्पियनसिप अगष्ट २९ देखि सेप्टेम्बर ५ सम्म आयोजना हुँदैछ ।
प्रतियोगितामा आयोजना चीन सहित १६ टिमले सहभागीता जनाउनेछन् । सेन्ट्रल जोन मध्य इस्ट जोन र वेस्ट जोनबाट कुनैपनि देशले दाबी प्रस्तुत नगरेपछि उज्वेकिस्तान, श्रीलंका र नेपाल खेल्ने गरि बैठकले निर्णय गरेको हो ।
बाँकी १० राष्ट्रमध्य सेन्ट्रल जोनबाट नियमित प्रतियोगिता खेलिरहेका ईरान, ताजकिस्तान र भारत वरियताका आधारमा सिधै छनोट भएका छन् । कोभिड–१९ को अवस्था हेरेर एभीसीले प्रतियोगिता हुनु दुई महिना अघि खेल हुने÷नहुने विषयमा पक्का गर्ने बताएको छ ।
कोभिडकै कारणले गत फागुनमा विच भलिबल समेत स्थगित बनेको थियो । गत वर्ष नेपालमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालको महिला टिमले ऐतिहासिक रजत पदक जितेको थियो । फाईनलमा भारतसंग ३–२ को सेटमा पराजित बनेको नेपालले एतिहासिक रजत पदक भने प्राप्त गरेको थियो ।
साग अघि बंगलादेशमा भएको एभीसी सेन्ट्रल जोन भलिबलमा नेपालको महिला टिमले स्वर्ण पदक जितेको थियो । भलिबलको ईतिहासमा सेन्ट्रल जोनमा नेपालले एतिहासिक स्वर्ण पदक हात पारेको थियो ।
महिला टिमको पछिल्लो प्रर्दशनलाई आधार मानेर नेपाल भलिबल संघले एसियन च्याम्पियनसिपमा नेपालबाट दाबी प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पुर्व राज्यमन्त्री बुढाकाे आर्थिक सहयोगमा भलिबल प्रतियोगिता,लिकु बन्यो बिजेता !
प्रथम मेयर कपको उपाधि मुड्केचुलालाई !
नेशनल च्याम्पियनसिपमा डाेल्पाले जित्यो दुई कास्य पदक
एक लाख पन्ध्र हजार राशिको अध्यक्ष कप जुफाल युवा क्लबलाई
नेशनल च्याम्पियनसिप अवार्ड हात पार्न डाेल्पाका दुई खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा